ပွဲ ခေါင်း စဉ်
ပြည်ပ စာ သင် သား အ တွေ့ အ ကြုံများ
ရည် ရွယ် ချက်
လူ ငယ် များ ပြည်ပ ၌ မိမိ အ သိ တ ရား ဖြင့် ကျောင်း ရွေး ချ ယ် နိုင် ရန် မှ စ ၍ ကျောင်း တွင်း ကျောင်း ပြင် လူ မှူ့ဘ ဝ များ အ ကြောင်း ကြုံ ရ ဆုံ ရ တာ လေး တွေ ဖ လှယ် ကြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် စိတ် ပါ ဝင်စား သူ လူ ငယ် များ အား လုံး ပြည်ပ ကျောင်း တက် ရန် ရှိ ရှိ မ ရှိ ရှိ တက် ရောက် နိုင် ပါ တယ်
ဒါ့ အ ပြင် ပါ ဝင် ဝိုင်း ဖွဲ့ ဆွေး နွေး ကြ မဲ့ လူ ငယ် များ ရဲ့ ASEAN Free Trade Area ASEAN Economics Community မ ကြာ ခင် က ကျင်း ပ ခဲ့ တဲ့ ASEAN MEDIA FORUM, များ အ ပေါ် ကို တက် ရောက် ခဲ့ တဲ့ လူ ငယ်တွေ ရဲ့ အ တွေ့ အ ကြုံ အ မြင် အ များ ဘာ သာ စကား သင် ယူ မှူ့ အ မြင် များ ( ဥ ပ မာ တ ရုတ် စ ကား နဲ့English စကား အ နာ ဂတ် မှာ ဘယ် ဟာ ပို အ ရေး ပါ မ လဲ )ကျောင်း တွေ က သင် ကြား ပုံ တွေ တ ပြည့် ဆ ရာ ဆက် ဆံ ရေ တွေ ပ ညာ သင် ပြီး အ မိ နိုင် ငံ ပြန် ပြီး လုပ် ငန်း ဝင် မ လား လုပ် ငန်း သစ်ထူ ထောင် မှာ လား မိ ဘ လက် ငုတ်လက် ရင်း ပြန်လုပ်မ လား မိ ဘ လက် ငုတ်လက် ရင်း အလုပ် တွေ မှာ သူ တို့ ရဲ စာ တွေ့ တွေ ကို အ သုံး ချ ခွင့် ရ နိုင် မ ရ နိုင် ပြင် ဆင် ပြောင်း လဲ ခွင့် တွေ ရ နိုင် မ လား စ တဲ့ လူ ငယ် အ မြင် တွေ ကို လွတ်လွတ် လပ် လပ် ပျော် ရွှင် ပေါ့ ပါး စွာ ဝိုင်း ဝန်း ဆွေး နွေး ကြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်
လူ ငယ် တွေ ဆောင် ရ ရှောင် ရမဲ ဥ ပ ဒေ သု တ ကို လည်း Advocate U Tin Maung Kyaw မှ ဝိုင်း ဝန် အ ကြံ ပြူ ဆွေး နွေး ပေး မှာ ဖြစ် ပါ တယ်
တ ချိန် လုံး လူ ကြီး ပြော သ မျှ ဟော ပြော ပွဲ တွေ သာ များ နေ ချိန် ဒီ လူ ငယ် ပွဲ က စိတ် ဝင် စား စ ရာ ကောင်း မှာ ပါ
ပြည်ပ ကျောင်း တွေ ရဲ sponsor လုံး ဝ မ ပါ လို့ ကျောင်း marketing ပွဲ မ ဟုတ် တာ က လုံး ဝ သေ ချာ ကြောင်း ပါ
1) Yee Win Naing (Mandalay resident)
BBA (Sripatum University,Bangkok,Thailand) please pronounce Si Pa Thong University
MBA (Assumption,Bangkok Thailand)
2) Si Thu Aung (Yangon)
BA English (Dagon University)
Diploma in Hospitality (MDIS,Singapore)
3) Kyaw Moe Htet
LLB (Dagon University)
5) U Tin Maung Kyaw,Advocate,Yangon.
6) Sayar U Aye Q and Min Tayza Nyunt Tin,U Nyunt Tin Associates IP Law Firm.
U Nyunt Tin Associates Intellectual Property Law Firm (Yangon),
BIZLAW CONSULT (Mandalay) and TIP TOP Capacity Development Center(Mandalay).
U Nyunt Tin Associates (Yangon)
Attn: Ma Myint Myint Wai (375754)
BIZLAW CONSULT (Mandalay)
Attn: Ma Thida Myint (098032493)and (095128224)
TIP TOP Capacity Development Center (Mandalay)
Attn: U Zaw Min Tun (095162062 & 0291001818)
Venue: Hotel Mandalay, 09:00 AM – 12:00 noon,19-12-2010,